Gluten-Yemahara Keke Neshuga Yemahara Strawberry Frosting + Vhidhiyo - Cake
Frosting Uye Icing
Iyo Yakanakisa Gluteni-Yemahara Keke Neshuga Yemahara Strawberry Frosting
Gluten-Yemahara Keke Kubva Pakutanga Ne Yakaderera Shuga Strawberry Frosting
Iwe haungatendi iyi keke isina-guten! Bob's Red Mill 1: 1 furawa yekubheka ndiye wandinofarira kugadzira keke isina gluten inonaka seicho chaicho. Ndinonyatsoda hupfu uhwu nekuti hauna hunhu husina kujairika kana kugadzirwa kusingazivikanwe. Iri keke rakareruka uye rinopisa, hapana kana munhu anoziva kuti haina-guten! Ndinoda kubatanidza iri keke neangu yakadzikama yakarohwa kamukira keke yakasanganiswa neimwe sitirobheri puree rakareruka uye rakaderera carb keke.
Kana iwe waida kugadzira iyi keke kunyangwe yakaderera mushuga, chinja iyo shuga mukakeji yekeke ne Swerve kubheka shuga iyo inogona kazhinji kuwanikwa muchitoro chegirosa kubheka mukana.
Iyi kamukira isina keke ye-gluten yakanaka kune kupemberera kwekuzvarwa kweiye akakosha mumwe munhu! Wese munhu akakodzera kuve nekeke pazuva rake rekuzvarwa handiti? Baba vangu havagone kuva negluten uye vanoda keke iyi isina vanilla yeguteni neyangu chokoreti ganache .
Nyore Gluten Yemahara Keke Recipe
Baba Vangu vakaita chirwere chegluten makore angangoita gumi apfuura pazera remakore makumi matanhatu nemaviri. Vakanga vaine kurwadziwa kwakanyanya muchipfuva chavo zvekuti vakafunga kuti vairwara nemoyo ndokuenda kuchipatara. Dai iwe uchiziva wangu wekare-chikoro chakaoma mukomana Baba, iwe ungadai waziva iro hombe basa raive iro!
Vanachiremba vake vese vakamuudza kuti aive akagwinya uye akagwinya uye vakamupa steroid yekurwadziwa pachipfuva. (Isa chigumbu chakatsamwiswa kubva kwandiri). Mushure mekutaura nababa vangu nezvekurwadziwa kwake, ndakarangarira shamwari yepfungwa iyo yaive zvakare yeergoriya yegorosi uye zviratidzo zvake zvaitaridzika zvakafanana. Ndakakurudzira Baba vangu kuyedza kusiya gorosi kwevhiki uye ivo vakandiseka.
unoita sei kuti bhokisi rekeke riravire sekeke rekeke?
“Ndanga ndichidya chingwa hupenyu hwangu hwese. Handisi kukanganiswa nechingwa ”
Mushure memavhiki mashoma zviratidzo zvababa vangu zvakawedzera zvekuti haana kukwanisa kudya chero chinhu. He could not lay down and he could barely walk anga achirwadziwa zvakanyanya. Mushure memazuva mashoma ekungonwa mvura chete, akanzwa zvirinani. Chinhu chekutanga chaakaita paainzwa zvirinani kuedza uye kudya chingwa.
Kurwadziwa kwake kwainge kwakanyanya akati akapotsa afa. Ndipo paakazonyatsoziva kuti igorosi. Akarwadziwa! Aizodya sei? Aive nechokwadi chekuti achafa nenzara lol.
Ehezve, haana uye makore gumi gare gare, ane hutano kupfuura zvandisati ndamuona iye uye 50 lbs akareruka. Zvakawanda zveimwe nyaya yake yehutano yakanyangarika nekudyiwa kwegorosi (sekuzvimba mumabvi ake uye migraines).
Pandinoona zvitaurwa pamhepo zvichiseka nezvekuti sei vanhu vasina kumbobvira vaita segorosi kugorosi uye kuti vanofanira kunge vachizvigadzira, ndinoshuva kuti dai ndaigona kuvazivisa kuna baba vangu. Haatombofaniri kunyunyuta kana kubvuma kushaya simba.
Chaizvoizvo haana kusarudza kusava neguten-asi zvachinja hupenyu hwake hwese. Ndichiri kuitira Baba vangu zvinonaka pese pandinoenda kunoshanyira ndichishandisa bobs tsvuku chigayo 1: 1 gluten-isina kubheka hupfu nekuti ini handifanirwe kuchinja chero eangu mabikirwo. Ini ndinongotsiva hupfu neupfu husina gluten uye hunobuda hwakakwana nguva dzese.
Iko kuumbwa kwekeke iri kwakanyanya kushamisa! Chiedza, chinopisa uye chine hunyoro!
Panogona kunge paine zvimwe zvigadzirwa zve1: 1 hupfu husina gluten munzvimbo yako kana unogona kuodha kubva kuAmazon asi ini handigone kuvimbisa mhedzisiro yakafanana. Ingo ita chokwadi chekuti unotsvaga chimwe chinhu chinoti 1: 1 kutsiva, kwete chete hupfu husina gluten.
Matipi Ekugadzira Iyo Yakakura Gluten Yemahara Keke Recipe
Ita shuwa kuti iwe unozvirova zvakanaka! Sezvandamboreva, iyi resipi inoshandisa iyo yekumberi yekusanganisa nzira inova nzira imwecheteyo yandinoita mukurumbira wangu vanilla keke recipe. Kudzoreredza kusanganisa kunogadzira nyoro nyoro nyowani asi iwe zvakare unofanirwa kuyeuka kuti hapana kana guten mune ino keke (aka chimiro) saka zviri SUPER zvakakosha kuti iwe uite iyo yekutanga bit yekusanganisa kwemaminitsi maviri akazara ekuvandudza chimiro chako.
maitiro ekugadzira sitirobheni keke musanganiswa
Ita shuwa kuti mazai ako, bota nemukaka tembiricha yemukati. Wese munhu anokanganwa nhanho iyi uye zvinogona kukonzera iyo keke kuti iwane yakanyorova gummy rukoko pazasi kana zvakanyanya, kudonha. Kwete bueno.
Shuga Yemahara Strawberry Frosting
Ini handidi super inotapira chando uye ndaida kuti iyi keke ive yakaderera carb / yakaderera shuga sezvinobvira. Ndakafunga kuenda neimwe yakasimbiswa yakarohwa kirimu uye kuwedzera mune imwe sitirobhu puree (yakagadzirwa isina kuwedzerwa shuga) kuti iite inotapira isina kuwedzera shuga. Iyo tambo iri soooo yakanaka! Kana iwe usiri kuda kugadzira yako yega puree ipapo unogona kuwana imwe shuga yemahara sitirobhu jam uye iyo inoshanda zvakangonaka!
Iyo yakasimbiswa yakarohwa kirimu yakasimba zvakakwana kuti ite chando keke uye ibate chimiro chayo kwemazuva. Zvinoshamisa izvo zvingaitwe nediki gelatin.
ndekupi kwandingatenga modelling chokoreti
Gluten Yemahara Keke Sanganisa
Haudi kukakavara nekugadzira keke rako kubva pakutanga? Bob's Red Mill inogadzira mamwe anoshamisa chaiwo makeke musanganiswa zvakare! Vanilla kana chokoreti. Chinhu chakanakisa pamusoro pavo ndechekuti havana chero hunhu husina kujairika. Ini handigone kana kutaura mutsauko.
Mazhinji ezvitoro anotakura mikaka yaBob's Red Mill keke, ndinowana yangu kubva kuSafeway muchikamu chisina guten.
Iyi kamukira inogadzira mamwe makeke makuru e-gluten-asinawo! Ingoshandisa diki ice cream scoop kana chipunu kuti ugovane bhatter yako mumakapu ako emakeke nemakapu emakeke. Edza kusazadza (sezvandakaita) kuitira kuti uve neakanaka kunyange yepamusoro. Bika pa350 ℉ kwemaminetsi gumi nemasere kusvika makumi maviri kusvikira nzvimbo yacho yangoiswa. Rega kupora. Frost makeke ako newaunofarira buttercream! Saka yummy!
Wakagadzirira kugadzira iyo inonaka kwazvo-isina-keke keke zvachose? Tarisa yangu vhidhiyo dzidziso nezve maitiro ekugadzira yangu yakanyorova nyoro uye nyoro gluten-isina vanilla keke recipe neitsva buttercream kutonhora.
Iyi recipe yeGluten-Free Cake yakajeka uye yakasviba, hapana munhu achaziva kuti haina guten! Yakasimudzwa nefresh sitirobheri chando, ichi chaicho chisina mhosva-kurapwa. Inoita yakakwana batter kwemaviri 8'x2 'keke kutenderera. Gadzirira Nguva:gumi neshanu mins Nguva Yakabika:30 mins Nguva Yese:Chechina mins Makorori:293kcal
Gluten Yemahara Keke Zvinongedzo
▢14 oz (397 g) Bobs Red Mill 1: 1 hupfu hwekeke
▢12 oz (340 g) shuga yakawanda kana chinotsiva shuga. tevera mafambiro pane package
▢1 tsp (1 tsp) soda yekubikisa
▢piri tsp (piri tsp) poda yekubheka
▢1 tsp (1 tsp) munyu
▢1 tbsp (1 tbsp) vanilla yakabudiswa
▢10 oz (284 g) mukaka wese
▢3 yakakura (3 yakakura) mazai
▢1 oz (28 g) mafuta ekubikisa
▢6 oz (170 g) ruomba
Strawberry Yakaputirwa Cream Frosting
▢8 oz (227 g) kirimu inorema
▢8 oz (227 g) sitirobheri puree
▢1 tsp (1 tsp) upfu gelatin
▢1 Tbsp (1 Tbsp) mvura inotonhora
▢1 teaspoon kirimu inorema
Pisa huni kusvika ku350º F uye gadzirira maviri 'masendimita makeke epani nekuburitswa kwepani
Edzai zvinoriumba izvi mozviisa mundiro. Whisk kuti ubatanidze.
Edzai pakaomeswa zvigadzirwa uye uzviise mune yemira musanganisi mbiya.
Batanidza padhaya kune musanganisi, uye batidza inononoka kumhanya (kumisikidza 1 paVabatsiri veKicheni Aid). Zvishoma nezvishoma wedzera zvidimbu zvemafuta ako akanyoroveswa kusvikira zvese zvawedzerwa. Rega kusanganisa kusvikira batter yakafanana nejecha rakakora.
Wedzera 1/3 yemvura yako zvinoshandiswa paunenge uchivhenganisa pasi kusvikira wanyoroveswa. Ichi chikamu chakakosha. Usawedzere yakawandisa mvura.
Wedzera kumhanyisa kumhanya kusvika pakati (kumisikidza 5 paKicheni Aid musanganisi). Regai musanganiswa whip kumusoro kusvikira wakora uye wakareruka muvara. Inofanira kutaridzika kunge yakapfava-shandisa ice cream. Ukasarega iyo batter ichisanganisa zvizere, iwe unozopedzisira uine mapfupi, makeke makeke. Ndinorega kusanganisa kwangu kwemaminitsi maviri azere.
Svina ndiro. Iri idanho rakakosha. Kana iwe ukasvetuka icho, iwe unenge uine yakaoma mapundu eupfu uye zvisina kusanganiswa zvigadzirwa mune yako batter. Ukazviita gare gare, ivo havazosanganise zvizere.
Zvishoma nezvishoma wedzera mune mamwe ako emvura zvigadzirwa, kumira kuti utore ndiro iyo imwezve imwe nguva pakati. Bhatter yako inofanirwa kunge iri gobvu uye kwete zvakare kumhanya. Ini ndinofanira kupunuira yangu mumidziyo ine rubber spatula.
Zadza mapani 1/2 izere. Ipa pani pombi padiki padivi kuti ubatanidze batter uye kubvisa chero mabhuru emhepo. Ini ndinogara ndichitanga nekubheka kwemaminetsi makumi matatu e8 'uye madiki makeke uye maminetsi makumi matatu nemashanu ye9' uye makeke mahombe uyezve ndichitarisa kuti ndopai. Kana iwo makeke achiri akanyatso kuseka, ini ndinowedzera imwe maminetsi gumi. Ini ndinotarisa yega maminetsi mashanu mushure meizvozvo kusvika ndave padhuze uyezve iri yega maminetsi maviri. Makeke anoitwa panogadzirwa mazino mukati munobuda zvimedu zvishoma.
Mushure mokunge makeke atonhorera kwemaminitsi gumi kana mapani acho akatonhorera zvakakwana kuti ubate, flip makeke pamusoro uye ubvise kubva pamapani kuenda kumatanda anotonhorera kuti atonhore zvakakwana. Putira mupurasitiki nekuputira mufiriji.
Kana makeke achinge atonhodzwa mufiriji (ingangoita awa yeiyi saizi, kureba kwemakeke mahombe), tort, zadza uye gumbuu jasi zvese kamwechete. Kana iwe ukasaronga pamusoro pekupfeka zvakapusa musi iwoyo iwoyo, unogona kusiya makeke akaputirwa pamusoro petafura. Chilling inogona kuomesa makeke ako asati aiswa iced, saka dzivisa kuachengeta mufiriji kwenguva yakareba kupfuura zvakafanira. Makeke anogona kuomeswa nechando mumabhegi efriji ekushandisa zvekare.
Fafaza gelatin pamusoro pemvura uye rega igadzirirwe kwemaminitsi mashanu. Pisa mu microwave kwemasekonzi mashanu kusvikira granules dzanyungudika. Whip cream kune nyoro nyoro uye wobva wawedzera mune yako vanilla. Wedzera mu 1 teaspoon cream kune gelatin musanganiswa wozonyorova mune yako yakanyunguduka gelatin uchinge uchisanganisa pazasi. Peta mu 1/2 mukombe inotonhorera yakacheneswa sitirobheri kana shuga isina jamhu
Gluten yemahara keke iyo inonaka kwazvo, hapana munhu anozoziva kuti haina gluten isina!
Kushumira:1g|Makorori:293kcal(gumi neshanu%)|Carbohydrate:27g(9%)|Mapuroteni:pirig(4%)|Mafuta:19g(29%)|Mafuta Akaguta:12g(60%)|Cholesterol:95mg(32%)|Sodium:376mg(16%)|Potassium:155mg(4%)|Shuga:26g(29%)|Vhitamini A:640IU(13%)|Vhitamini C:9.7mg(12%)|Calcium:77mg(8%)|Iron:0.3mg(piri%)
Ngirozi Chikafu Keke Nema Strawberries Uye Yakarohwa Cream
keke yekushongedza yekushongedza nefondant
Homemade sitirobheki keke recipe nema fresh strawberries
yakanakisa keke nzira yekushongedza neye fondant
sei kugadzira chitoro chakatengwa keke sanganisa zvirinani
Chokoreti Mirror Glaze Keke
Iyi yakanaka girazi glaze keke recipe ndiyo chaiyo kurapwa kune yakakosha chiitiko! Yakazadzwa nemousse, yakarohwa kirimu uye sitirobheri!
Chokoreti WASC Keke (yakagadziriswa chokoreti keke musanganiswa)
Iyi chokoreti WASC iri nyore kwazvo kugadzira, izere nekuravira uye zvinonaka senge chaicho chinhu. Hausi kugadzirira kutanga kubheka? Edza chokoreti WASC!